PHOTOS ။ Tele RELAY တစ်ခု - အတွက် "fiesta" ဖို့ "ကျေနပ်" အမ်မာ Smet
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "PHOTOS ။ အတွက် "fiesta" ဖို့ "ကျေနပ်" အမ်မာ Smet
PHOTOS ။ အတွက် "fiesta" ဖို့ "ကျေနပ်" အမ်မာ Smet
ဒါဝိဒ်သည် Hallyday ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သြဂုတ်လ 14 အပေါ်သူ၏မွေးနေ့အခမ်းအနားကျင်းပ! ဂျော်နီ Hallyday ၏သားအဘို့ party စေရန်, အရာ 53 နှစ်ပေါင်းယခုရှိပါတယ်။ ထိုအဘို့, မိမိမိသားစုအပေါ်ရေတွက်လို့ရပါတယ်။ မင်းသမီး Emma Smet, သူ၏ဒုတိယသမီး, တကယ်တော့ "ဟုသူမကလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ကြောင်းကို Instagram ကိုပေါ်ညွှန်ပြထားပြီးfiesta"။ သင်နှင့်အတူယနေ့ဖြစ်ဖို့ "ဒါကြောင့်လည်းရွှင်လန်းခြင်း"သူဝမ်းသာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအကြီးအညနပေိုငျးကတိပေးထားတယ်, ဒီနည်းနည်းအတွေးသရုပျဖျောဖို့ အဖေများအတွက်သူမသည်ဒါဝိဒ်သည် Hallyday နှင့်သူ၏ကြီးမားသောနှမ, Ilona Smet နှင့်အတူတစ်clichéသူမ၏ကလေးသည်တင်ခဲ့သည်။ ဒီတော့ချစ်စရာ။
မင်းသမီး Emma Smet မိသားစုကအမြဲပထဝီအနေအထားအရစည်းလုံးမဟုတ်သည်ကို ထောက်. , သူ့မွေးနေ့ကိုအဘို့သူ၏ဖခင်နှင့်အတူဖြစ်ရာ၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်နိုင်ပါတယ်။ သူမကလန်ဒန်နှင့်ပဲရစ်အကြားအသက်ရှင်တော်မူသည်မှန်လျှင်, ဆိုဖီယာအတွက်စကားပြန် မနက်ဖြန်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ဆိုင် TF1 အပေါ် ထုံးဖြူသုတ်ထားမျက်နှာစာနှင့်စိမ်းပင်လယ်, မြေထဲနေထဲမှာဂရိနိုင်ငံအချို့အားလပ်ရက်နေခဲ့ရသည်။
ဒါဝိဒ်သည် Hallyday ဤအတောအတွင်း, Los Angeles မှာကြီးပြင်းပေမယ့် ယခုပေါ်တူဂီတို့အကြားအသက်ရှင်တော်မူသည်ပဲရစ်နှင့်လန်ဒန်။ မိမိအမွေးနေ့ကိုအဘို့, ထိုသူအပေါင်းတို့သည် Lusitanian အဘိဓါန်ကမ်းခြေနှင့်တွေ့ဆုံရန်။ Darina Scotty, ဒါဝိဒ်သည် Hallyday ၏ Sylvie Vartan ၏သမီးနှင့်ဝက်အစ်မ သည် "fiesta" မကင်းမဲ့, သူ့ Instagram ကိုမြေားကိုအရသိရှိရသည်။
✟ (@emma__smet) က shared တစ်ဦးက post ကို on သြဂုတ် 14, 2019 မှာ 3: 53am PDT ရန်ကုန်
© Screenshot Instagram ကို
မင်းသမီး Emma Smet - ပဲရစ်အတွက် Arc မှာ44ème Cesar အခမ်းအနား၏ afterparty များအတွက် Photocall ။ အဆိုပါဖေဖော်ဝါရီလ 22
ပြည်သူ့: "ဒီဆိဒေါသကစား" ကျောက်စိမ်း Hallyday သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပါတီပြီးနောက်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၏ IRE ဆွဲဆောင်
မီးအောက်မှာတော်ဝင်: ပေါက်ကွဲမှု Farage ပြီးနောက်ယခင်လက်ထောက်ဒိုင်ယာနာပြင်းထန်သောတိုက်ခိုက်မှုလွှတ်တင်